Semalt विशेषज्ञ: Google एनालिटिक्स रेफरल यातायात रिपोर्टहरूबाट PayPal अपवर्जन
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक रस बार्बर, गुगल एनालिटिक्समा कसरी सच्चा रेफरलहरू ट्र्याक गर्ने बारे आफ्नो अनुभव साझा गर्दछ।
मलाई अझै त्यो समय याद छ जब मैले Semalt ग्राहकहरुसँग काम गर्न शुरू गरें। यो मेरो जीवनको सब भन्दा अचम्मको अनुभव थियो। मैले उनीहरूको वेबसाइटमा ट्राफिक कसरी प्राप्त गर्ने र उनीहरूको व्यावसाय वेबसाइटबाट कसरी धेरै कमाउने भनेर मूल्यांकन गर्न मैले केहि समय लिएँ। मैले रेफरल ट्राफिक स्रोतहरूको बारेमा थाहा पाएँ जसले Semalt धेरै ग्राहकहरू प्रदान गर्दछ। जब म यसको गुगल एनालिटिक्समा साइन-अप गर्छु, तब मैले थाहा पाएँ कि PayPal मुख्य रेफरल स्रोतको रूपमा देखा पर्दछ। गुगल एनालिटिक्समा रेफरल यातायात रिपोर्टिंगबाट PayPal कसरी बहिष्कार गर्ने? यदि तपाईं उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको लागि यो अद्भुत लेख प्रस्तुत गरेका छौं।
जब PayPal एक रेफरल ट्राफिक स्रोतको रूपमा देखा पर्दछ, तब यसको मतलब यो हो कि कसैले तपाइँलाई Semalt मा छोड्दैछ। तपाईं आफ्नो साइट प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ एक पटक उनीहरूले आफ्नो पैसा हस्तान्तरण गरे र हाम्रो सेवाहरू मध्ये एक खरिद गरे। यो चरण महत्त्वपूर्ण छ किनकि गुगलले निरन्तर प्रयोगकर्ताहरूको आईपी ट्र्याक गर्दछ जसले तपाईंको वेबसाइट रेफरल स्रोत लेनदेन पूरा गर्नु अघि अन्तिम पटक भ्रमण गर्थ्यो। गुगल विशेषताहरू जुन PayPal मा बिक्री मूल ट्राफिकबाट आएको हो र कुनै पनि हिसाबले छल गरीएको छैन। तपाईलाई यो जान्नका लागि भ्रामक हुन सक्छ कि धेरै मानिसहरू आयोगको आधारमा काम गर्दछन्। त्यहाँ संभावना छ कि ती मूल को लागी बहाना गरी, तपाइँको वेबसाइट मा नक्कली लेड जेनेरेट गर्दछ। PayPal पक्षमा, तिनीहरूले तपाईंलाई केहि पैसा हस्तान्तरण गर्नेछन् र उनीहरूको कमिशनहरू पाउनेछन्। हामीले भन्न खोजेको कुरा भनेको यो हो कि तपाईंको ट्राफिकको मूल स्रोतहरू र आगन्तुकहरूको IP ठेगानाहरू पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा खुशी हुनुहुन्छ कि तपाइँ कसरी जान्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले आफ्नो गुगल एनालाइटिक्सको सेटिंग्स र कन्फिगरेसन परिवर्तन गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले कुनै पनि समस्या बिना PayPal को प्रयोग जारी राख्नु पर्छ। तपाईं यसलाई भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्न प्रत्येक दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको स्थिति जाँच गर्न, तपाईंले आफ्नो Google एनालिटिक्समा सबै ट्राफिक रेफरल लिंकमा नेभिगेट गर्नुपर्नेछ। यहाँ तपाईंले PayPal विकल्प खोज्नु पर्छ र यसको बारेमा जान्नको लागि सिंहावलोकन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई मूल रेफरल स्रोतहरूको बारेमा थाहा छ?
तपाईको रेफरल प्रोग्रामहरूको मूल स्रोतहरूको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइटको लागि सबैभन्दा प्रामाणिक र मूल्यवान ट्राफिक के हो र आगन्तुकहरूको स्रोत के हो भन्ने बारे विचार हुनुपर्दछ। यसले गुगल विश्लेषक लाई तपाईंको लागि नक्कली रिपोर्टहरू तयार गर्नबाट रोक्छ, र तपाईं आफ्नो PayPal मा प्रत्येक खरीदको लागि पैसा पाउनुहुनेछ। धेरै व्यक्ति लिडाहरू उत्पादन गर्न र अधिक ग्राहकहरू ध्यान दिन ध्यान दिन्छन् ताकि उनीहरूका उत्पादनहरू वा सेवाहरू ठूलो संख्यामा बेचिनेछ।
कसरी यो समस्या समाधान गर्ने?
तपाईको गुगल एनालिटिक्समा रेफरल बहिष्करणको रूपमा PayPal थपेर तपाईले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको Semalt खातामा नक्कली ट्राफिक हुनबाट रोक्नको लागि सब भन्दा सजिलो र सब भन्दा सुविधाजनक तरिकाहरू मध्ये एक हो। तपाईं आफ्नो यातायात को स्रोत संग परिचित हुनुपर्छ र अधिक र अधिक नेतृत्व पैदा गर्न कदम चाल्नु पर्छ। यस उद्देश्यका लागि तपाईले आफ्नो Google एनालाइटिक्सको प्रशासक बाकसमा नेभिगेट गर्नुपर्नेछ र ट्र्याकि information जानकारी खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाइँले शुरू गर्न रेफरल बहिष्करण सूची विकल्प छान्नु पर्छ।